China ahaziri crisper mkpuchi mere site plastic injection ebu emepụta na suppliers |DTG
Mkpuchi crisper ahaziri nke ejiri ihe ntụtụ rọba mee
Foto ndị egosiri bụ mkpuchi crisper, nke ihe ya bụ PP-SINOPEC M800E.Ọ bụ plastik injection ebu, ebu ihe bụ SNAK80 HRC48-52, ebu oghere bụ 1 * 2, nke pụtara na anyị ebu nwere ike na-emepụta 2 ngwaahịa site injections otu ugboro.Ndụ ebu bụ 500 puku gbaa, okirikiri ịgba ọgwụ ya bụ 60 sekọnd.Arịrịọ elu iji nweta ọkọlọtọ VDI33, ọkọlọtọ nke ifuru ahịhịa dị mma.
Akụrụngwa akụrụngwa: Ka ndị na-azụ ahịa na-elebawanye anya na ahụike, ndị mmadụ na-echekarị ihe gbasara ahụike, ịdị ọcha, nchekwa, dị ka ihe PC, ihe PE na ihe PP, bụ nke a na-ahụkarị.Ihe na-egbuke egbuke bụ ihe PP.Kacha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na gburugburu ebe obibi bụ iko na-eguzogide okpomọkụ.
Ntugharị: A na-ejikarị ihe ndị a na-ahụ anya ma ọ bụ translucent mee ha.Karịsịa, igbe iko na-eguzogide okpomọkụ bụ nke nnukwu iko borosilicate, na iko ahụ na-apụta ìhè.N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike mfe ịkwado ọdịnaya nke igbe ahụ na-emegheghị igbe mgbe ị na-eji ya.
Ọdịdị: The crisper na magburu onwe àgwà nwere a kenkowaputa ọdịdị, mara mma imewe na ọ dịghị burrs.
Okpomọkụ na-eguzogide: The crisper nwere nnukwu chọrọ maka okpomọkụ na-eguzogide, ọ gaghị deform na elu okpomọkụ mmiri, na ọ pụrụ ọbụna igba ogwu na mmiri esi.
Ọhụrụ: A na-enyocha ọkọlọtọ mba ụwa site na nnwale ike iru mmiri.Ikike mmiri nke igbe nchekwa dị elu dị elu okpukpu 200 karịa nke ngwaahịa ndị yiri ya, nke nwere ike ime ka ihe dị ọhụrụ ogologo oge.
Ịchekwa oghere: Nhazi ahụ bụ ihe ezi uche dị na ya, na igbe dị iche iche na-edobe ọhụrụ nwere ike idowe ma jikọta ya n'usoro, na-eme ka ha dị ọcha ma chekwaa ohere.
Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ: Ị nwere ike ikpo nri ozugbo na ngwa ndakwa nri, nke dabara adaba.
Mgbe ị na-azụrụ, tinyekwuo anya na:
A: Akụrụngwa na ịdị ọcha
Ma ọ na-emerụ ahụ mmadụ ma ọ bụ na-emetọ gburugburu ebe obibi, okpomọkụ na-eguzogide ihe onwunwe, otú ọ na-arụ ọrụ nke ọma na friza dị ala, ma enwere ike ịchekwa ya na friza ma ọ bụ jiri ya na oven microwave.
B: ịdịte aka
Ọ nwere ike iguzogide mkparị dị n'èzí ma ọ bụ mgbanwe okpomọkụ mberede (ngwa ngwa ifriizi, ngwa ngwa froth), ma ọ nwere ike idowe elu ahụ enweghị akara na igwe efere.
C: Ọdịiche dị iche iche
Nha na ọrụ dịgasị iche iche site na mkpa dị iche iche nke ndị ọrụ, nke bụ ndị mmadụ kwesịrị ịtụle mgbe ị na-ahọrọ igbe crisper.
D: Ịdị ike
Nke a bụ isi ihe ndị mmadụ na-echekarị mgbe ha na-azụrụ crisper.Ịrụ ọrụ mkpuchi dị mma bụ ihe dị mkpa maka idobe nri na nchekwa ọhụrụ ruo ogologo oge.Site na akara akara, nri dị n'ime nwere ike zere mmetụta mpụga (dịka mmiri mmiri, mmiri mmiri, isi ísì, wdg).
E: Ntụkwasị obi
Ọ dị mkpa ịmara ma ngwaahịa ahụ sitere na azụmahịa nke na-ahụ maka imepụta igbe crisper.Mgbe enwere nsogbu dị mma, ma ọ nwere ike ịnye ọrụ ire ere ma ọ bụ dochie anya n'oge, wdg, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịhọrọ ụlọ ọrụ nke nwere ike ichebe ikike na ọdịmma nke ndị na-azụ ahịa.
DTG – Akpụkpọ rọba nke a pụrụ ịdabere na ya na onye na-ebubata ihe ngosi!
Nke gara aga: Onye nrụpụta ODM China Plastic Washer nchekwa Gasket
Plastic TPE Pump ahaziri ahazi na inject...